Ogaaw sababta aad u kasbatay adkaysiga xawaaraha iyo hababka waxtarka leh si aad uga baxdo - Dib u soo celinta fayadhowrka
Home » blog » Baro sababta aad u kasbatay adkaysiga xawaaraha iyo hababka waxtarka leh si aad uga baxdo
Maxay yihiin sababta ugu weyn ee dufanka caloosha? Waxaa jira aragti badan oo arrintan ku saabsan. Dadka qaarkood waxay yiraahdaan jinsiyadaha saboolka ah. Dadka kale waxay ku andacoodaan inay tahay diiqada. Iyo dad badan oo kale waxay aaminsan yihiin in ay sabab u tahay dheef-shiid kiimikaad hooseeya. Haddaba waa maxay runta? Xaqiiqdii, waxay had iyo jeer tahay natiijo ka dhalatay dabeecadaha cuntada ee aan caadiga ahayn iyo hab nololeed aan firfircooneyn.
* Waa maxay qorshaha cuntada ee ugu haboon ee miisaanka lumay?
Cuntada oo ku jirta cuntooyin badan oo dabiiciyan ah. Xeerka aasaasiga ah ee xasuusta waa in la iska ilaaliyo cuntooyinka la shaqeynayo. Tani waa istaraatijiyad xoog leh laakiin istiraatijiyad sahlan oo ay dad badani isticmaalaan dufanka caloosha. Waqtiga aad cunaysid marka aad wax cunayso waa muhiim. Guud ahaan, ujeeddadiisu waa inaad iska ilaaliso cunidda inta lagu jiro mudada dheer ee waxqabadka. Inta badan shakhsiyaadka, tani waxay soo daahday habeenka fiidkii kahor intaanay seexan.
Maadaama aadan firfircooneynin si aad u gubto kalooriyada, tani badanaaba waa mid ka mid ah sababaha badanaa lagula taliyay in aadan cunin inta aadan sariirta aadin. Markaa jirku wuxuu ku dhamaanayaa kaydinta inta badan nafaqooyinka sida dufanka. Kaliya cun cunnida miraha iyo khudaarta haddii aad gaajeysid waqtiyada firfircoonaanta. Haddii aad raadineyso sahlan inaad raacdo qorshaha, ka fiiri Cun Jooji Cun barnaamij loogu talagalay ragga iyo dumarka da 'kasta. Barnaamij kale oo caan ah oo loogu talagalay miisaanka lumay oo aan ku talineyno 4 Todobaadkii Cunto by Brian Flatt.
Haddii aad dooratid mid ka mid ah qorshayaasha aan ku soo sheegnay ama aan ahayn, khadka hoose ee miisaanka lumay waa in qorshahaaga cuntada uu yahay mid muhiim u ah shaqadaada. Sababtoo ah miyuu jiraa waqtiga oo dhan qolka jimicsiga haddii aad wax cunayso sida qashinka? U hubso inaad bedesho caadooyinkaaga cuntada oo isku day inaad noqoto mid firfircoon. Taasi waa qodobka ugu muhiimsan ee talo ee aan ku siin karno.
* Waa maxay habka ugu wanaagsan ee jimicsiga?
Inkastoo aad maqasheen, haddana ma soconayo treadmill saacadaha. Dhibaatooyinka gubanaya ee duur-joogta ah ayaa ah mid aad u badan, oo aad u baahan tahay inaad ku socoto wakhti aad u dheer si aad u aragto natiijooyin muhiim ah.
Ragga, barnaamij jimicsi oo weyn oo aan ku talineyno ayaa noqon doona Barnaamijka Beerka Miisaanka jirka. Miisaanka jirka culeyska jirka waa qorshe maalin ah oo 30 ah oo ku lug leh isticmaalka miisaankaaga jirka. Fiiri fiidiyowga hoose ee 10 ee laylisyada miisaanka jirka ee ugu fiican.
Qaado Ripped & khafiif ah ee 30-Days leh Xajmiga Miisaanka Body
Dumarka, barnaamijyada jimicsiga weyn ee 2 ee aan kugula talineyno waxay noqon doonaan Bikini jirdhiska jirdhiska iyo foorarka xajmiga. Bikini Shaqo jireed wuxuu ku siinayaa fiidiyoowga jimicsiga jimicsiga online-ka ah, hagaha nafaqada, hagaha tababarka, 21 maalin walba jimicsiga jirdhiska iyo waxyaabo kale oo badan.
Xajmiga Hooska Hoose wuxuu yahay barnaamij cusub oo tababar ah oo ay sameeyeen Tababaraha shakhsiga ah Danette May. Waxyaabaha muhiimka ah ee ku saabsan Qalal xajmiga ah waa in Danette May ay u soo bandhigto qorshaheeda DVD ee BILAASH ah oo kaliya waa inaad bixisid maraakiibta sidaa daraadeed waa hubaal inaad qiimayso. Xajmiga Xajmiga Qalalaasaha waxaa sidoo kale ka mid ah qorshaha cunnooyinka maalinta 10 ee raashinka duxda leh ee dufanka leh.
Inkastoo aysan jirin jimicsi jimicsi, waxaa jira jadwallo badan oo loo xaqiijiyay inay shaqeeyaan. Barnaamijyadan tababarka wax ku oolka ahi waxay ka caawiyeen kumanaan qof inay ku daadiyaan dufanka jirkooda. Ka dib mid ka mid ah habdhaqanka asluubta ah ayaa kaa caawin doona inaad hesho natiijooyin aad rabto inaad dhakhso udoonto.
* Waa maxay layliyada ugu wanaagsan?
Tababarada jidhka oo buuxa iyo tababarka isbeddelka sare (HIIT) mucjiso shaqo. Ka fikirida waxa HIIT yahay? HIIT, ama tababarka isbeddelka sareeya, waa farsamada tababarka ee aad bixisid dhammaan, boqolkiiba boqol si dadaal ah oo loo maro jimicsi degdeg ah oo aad u daran, oo ay ku xigto waqti gaaban, mararka qaar firfircoon, mudada soo kabashada. Isticmaalidda jimicsiga jidhka oo buuxa oo leyliya jimicsiga muhiimka ah ee bartilmaameedsanaya calooshaada, wuxuu kaa caawinayaa hagaajinta wareegga dhiigga ee gobolkaaga caloosha; taasoo keeni doonta in luminta caloosha oo ka sii darto.
Waxyaabaha ugu muhiimsan ee xasuusiya jadwalkaan jimicsiga waa inaad u baahato inaad si sax ah u sameyso ka hor intaanad dhaqaaqin. Dad badan ayaa ku soo noqda caado-jimicsiga layliyadan oo leh qaab liidata oo kaliya si ay u sameeyaan dib-u-celin dheeraad ah Foom xumida ayaa waxyeello ka soo gaarta wanaag.
Marka la fuliyo si aan sax ahayn, jimicsiga caloosha wuxuu u horseedi karaa dhibaatooyinka danbe ee mustaqbalka. Kaliya hubso inaad taqaano farsamada saxda ah ka hor intaadan boodin jadwalkaaga jimicsigaaga. Waa maxay layliyada ugu wanaagsan? Waxaa jira jimicsiyo badan oo aad kala dooran kartid, halkan waa mid weyn oo ku bilaabma:
* Gubashada kubbadda xajinta
Marka la sameeyo hab sax ah, tani waa mid ka mid ah hababka ugu wanaagsan ee looga takhalusi karo dufanka caloosha. Waa kuwan waxa aad u baahan tahay inaad sameyso: marka hore gadaal u laabo kubadda xasiloonida, adoo hubinaya in hooseeyo iyo dhexdaada dhabarkaaga lagu soo riixayo.
Iska hubi inaad jilbahaaga jilciso oo ha u ogolaan cagahaaga inay dhulka ka soo baxaan. Hadda gacmahaaga gadaashooda madaxaaga saar, oo isu kicin sida aad rabto oo aad u xun tahay ... ka dibna si tartiib tartiib ah dib ugu noqo booska bilowga.
* Laakiin maxaa u isticmaala kubbadda jimicsiga?
Dhaqdhaqaaqa aad u badan ayaa si fiican u socdaalaya sababtoo ah kubbadda jimicsiga ayaa sababa maqaarka si aad u badan. Waxa kale oo uu ka shaqeeyaa murqaha badan inta uu joogtada joogtada ah. Waxaad ku gubi doontaa kalooriyo badan iyo horumarin dhexdhexaad ah oo leh jimicsiga jimicsiga.
Ugu dambeyntii, laakiin ugu yaraan, fure u ah maaraynta miisaanka waa guul. Hubi inaad haysatid qorshe la xaqiijiyay oo aad qaadato tallaabo aan adageen oo joogto ah si aad u gaarto natiijooyinka miisaanka lumay ee aad rabto. Maadaama dad badani aysan haysanin bartilmaameed ku filan, dadka intooda badani waxay bilaabaan laylisyada asaasiga ah waxayna joojiyaan dhowr usbuuc taas oo ah nasiib daro.
Tani waa sababta barnaamijyada jimicsiga sida kan 1 Saacaddii Qaraxa iyo Danette May oo ah DVD-da "Free Flat Belly Fast Fast DVD" aad ayay wax ku ool yihiin. Qorshayaashani waa waqti go'an, oo aad taqaanid waxa dhabta ah ee aad sameyneyso maalin kasta. Dhammaan waxaad u baahan tahay inaad sameyso waa la socdaa barnaamij si aad u aragto natiijooyinka aad rabto. Tani waa isweydaarsiga iyo joogteynta waxay noqon doontaa saaxiibkaaga ugu fiican marka ay timaaddo in lagu gaaro jirka aad rabto. Nala soo socodsii fikradahaaga ku yaalla qodobkan hoos ku xusan fariimaha hoos ku qoran oo aad xor u tahay inaad wadaagto talooyinka lumay miisaanka kale ee aad haysato